Voalohany indrindra aloha, dia satria tsotra loatra io tantara io ho an’ny saina feno avonavon’ny olombelona, izay mitady ny hanazava ny zavatra rehetra amin’ny fanamarinan’ny fisainany, na dia efa hita izao aza fa tsy takany izany. Hoy anefa ny Baiboly hoe: “Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin’Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao” (Hebreo 11.3).
“Dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenan’(Andriamanitra) tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariany izao tontolo izao, Izy koa no famirapiratan’ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin’ny herin’ny teniny; ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotana Izy, dia nipetraka teo amin’ny tànana ankavanan’ny Lehibe any amin’ny avo” (Hebreo 1.2-3).